သူပြေလည်ချိန်မှာ မစံစားခဲ့ရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာမျှဝေလာတဲ့ ဧရာ – Maythadin
သူပြေလည်ချိန်မှာ မစံစားခဲ့ရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာမျှဝေလာတဲ့ ဧရာ
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ(၂၀) ရက်နေ့လေးကတော့ ဟာသပညာနဲ့ပရိသတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်ဦးဧရာရဲ့ အသက်(၆၀) ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ပရိသတ်အတွက် သူတတ်ကျွမ်းတဲ့ဟာသပညာရပ်နဲ့ ဘဝအမောတွေဖြေဖျောက်ပေးဖို့ အသင့်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လတ်တလောကိုဗစ်ကာလမှာတော့ ထီဆိုင်လေးဖွင့်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေပါတယ်။
ဒီနေ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာတော့ မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ မိဘနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ရာရာ့မွေးနေ့မှာ ကျေးဇူးရှင် ဖေဖေနဲ့မေမေ့ကို ရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမိုးလို့ ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမျှော်မာန်လျော့ကန်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာ…. ဖေဖေနဲ့မေမေကို လူပျိုပေါက်ဘဝကနေ ဖေဖေမေမေတို့နေဝင်ချိန်အထိ လုပ်ကျွေးခွင့်ရလိုက်ပေမယ့် သားအားမရခဲ့ပါဘူးဗျာ အထူးသဖြင့် မေမေကိုပေါ့ …
သားပရိသတ်အချစ်ကိုရလို့ အိမ်ဌားဘဝကလွတ်ပြီးဒီအိမ်လေးဝယ်နိုင်တဲ့အချိန်၊ ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ပြနိုင်တဲ့အချိန်၊စားချင်တာဝယ်ကျွေးနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှ ဆုံရှုံးခဲ့ရတယ်မေမေရယ် ၊ဖေဖေကိုတော့မေမေဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း…အိမ်ဦးခန်းမှာထားပြီး တတ်နိုင်သမျှကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်… နောင်ဘဝဆိုတာများရှိခဲ့လို့လူပြန်ဖြစ်ခွင့်ရရင် ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့သားပဲဖြစ်ပါရစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ. ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာခဲပပါတယ်။
သားသမီးတိုင်းကတော့ မိဘတွေကို အကောင်းဆုံးတွေနဲ့ ပဲ ကျေးဇူးဆပ်ချင်ကြမှာအမှန်ပါ။ ဦးဧရာကိုယ်တိုင်လည်း သူပြေလည်လာချိန်မှာမှ လူ့လောကက ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို လုပ်ကျွေးပြုစုရတာ အားမရခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာ မိဘနှစ်ပါးကို သတိရတမ်းတစိတ်နဲ့ ရေးသားမျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့ရက်လေးကစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနဲ့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့ ဆယ်လီကမ္ဘာမှာ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်။
ပရိသတျကွီးတို့ရေ ဒီနနေို့ဝငျဘာလ(၂၀) ရကျနလေ့ေးကတော့ ဟာသပညာနဲ့ပရိသတျခဈြခွငျးမတ်ေတာတှသေိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ လူရှငျတျောဦးဧရာရဲ့ အသကျ(၆၀) ပွညျ့မှေးနရေ့ကျမွတျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူကတော့ ပရိသတျအတှကျ သူတတျကြှမျးတဲ့ဟာသပညာရပျနဲ့ ဘဝအမောတှဖွေဖြေောကျပေးဖို့ အသငျ့ရှိသူတဈယောကျဖွဈပွီး လတျတလောကိုဗဈကာလမှာတော့ ထီဆိုငျလေးဖှငျ့ကာ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးနပေါတယျ။
ဒီနသေူ့ရဲ့မှေးနရေ့ကျလေးမှာတော့ မှေးနအေ့မှတျတရအနနေဲ့ မိဘနှဈပါးနဲ့ပတျသကျတဲ့အကွောငျးအရာလေးတှကေို ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ရာရာ့မှေးနမှေ့ာ ကြေးဇူးရှငျ ဖဖေနေဲ့မမေကေို့ ရိုသမွေတျနိုးလကျစုံမိုးလို့ ရှိခိုးပူဇျောဖူးမြှျောမာနျလြော့ကနျတော့ပါတယျခငျဗြာ…. ဖဖေနေဲ့မမေကေို လူပြိုပေါကျဘဝကနေ ဖဖေမေမေတေို့နဝေငျခြိနျအထိ လုပျကြှေးခှငျ့ရလိုကျပမေယျ့ သားအားမရခဲ့ပါဘူးဗြာ အထူးသဖွငျ့ မမေကေိုပေါ့ …
သားပရိသတျအခဈြကိုရလို့ အိမျဌားဘဝကလှတျပွီးဒီအိမျလေးဝယျနိုငျတဲ့အခြိနျ၊ ဆရာဝနျကွီးတှနေဲ့ပွနိုငျတဲ့အခြိနျ၊စားခငျြတာဝယျကြှေးနိုငျတဲ့အခြိနျကမြှ ဆုံရှုံးခဲ့ရတယျမမေရေယျ ၊ဖဖေကေိုတော့မမေဖွေဈစခေငျြတဲ့အတိုငျး…အိမျဦးခနျးမှာထားပွီး တတျနိုငျသမြှကြေးဇူးဆပျခှငျ့ရခဲ့တယျ… နောငျဘဝဆိုတာမြားရှိခဲ့လို့လူပွနျဖွဈခှငျ့ရရငျ ဖဖေနေဲ့မမေရေဲ့သားပဲဖွဈပါရစလေို့ဆုတောငျးပါတယျဗြာ. ဆိုပွီး ရေးသားမြှဝလောခဲပပါတယျ။
သားသမီးတိုငျးကတော့ မိဘတှကေို အကောငျးဆုံးတှနေဲ့ ပဲ ကြေးဇူးဆပျခငျြကွမှာအမှနျပါ။ ဦးဧရာကိုယျတိုငျလညျး သူပွလေညျလာခြိနျမှာမှ လူ့လောကက ထှကျခှာသှားခဲ့တဲ့ မိခငျဖွဈသူကို လုပျကြှေးပွုစုရတာ အားမရခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့အကွောငျး သူ့ရဲ့မှေးနရေ့ကျလေးမှာ မိဘနှဈပါးကို သတိရတမျးတစိတျနဲ့ ရေးသားမြှဝခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။မှေးနရေ့ကျလေးကစပွီး နောငျနှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျ အသကျရှညျကနျြးမာစှာနဲ့ စိတျခမျြးခမျြးသာသာနထေိုငျသှားနိုငျပါစလေို့ ဆယျလီကမ်ဘာမှာ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။အဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နတေ့ဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစနေျော။
ပရိသတ်တွေမမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရမယ့် သမီးငယ် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုချပြပြီး ဆေးကြီးကြီးထိုးလာတဲ့ အိအိ